Kuthetha ukuthini ukuphupha indlu isakhiwa? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ubomi buzele ziintlanganiso ezininzi kwaye ezinye zilungile, kodwa ezinye, ngelishwa, zizisa iimvakalelo ezimbi. Ukongeza, ukuphupha indlu isakhiwa kubonisa ithuba lokudibana nabantu ababalulekileyo kwakhona.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba iintlanganiso kufuneka zijongwe kwimbono entsha: ukufunda kwimeko. Ngendlela efanayo, kufanelekile ukuqonda ukuba ukuba kukho umntu ovele ebomini bakho kwakhona, luphawu lokuba into elungileyo kufuneka yenzeke.
Isimo sengqondo sokuthatha sixhomekeke kuwe kuphela kwaye asinandlela yakuthetha ukuba yintoni ekufuneka yenziwe. Kwelinye icala, iingcebiso ziya kunikwa kwaye umbono kukwenza ubomi bakho bube lula, kuba ukudibana kunokuba kubalulekile.
1 Ukuphupha indlu isakhiwa: Kuthetha ukuthini?
2 Iphupha lokwakha indlu yakho
3 Iphupha lokwakha indlu encinci
4 Iphupha lendlu ephakathi iyakhiwa
5 Iphupha lendlu eyakhiwayo
6 Ukuphupha indlu isakhiwa ngumntu owaziwayo
7 Ukuphupha indlu isakhiwa kungakhange kugqitywe
8 Ukuphupha ukuba indlu eyakhiwayo iyawa
9 Ngaba intsingiselo ilungile okanye imbi?
Ukuphupha indlu isakhiwa: Kuthetha ukuthini?
Wakhe wacinga ukuba kunjani ukudibana nesihlobo esele sifile? Iya kuba yinto entle kwaye izise iimvakalelo ezintle. Ngoku phendula omnye umbuzo: Kuza kuvakalelwa njani ukudibana notshaba kwakhona? Kungenzeka ukuba imeko yonke ivuselelwe kwaye ayizukulunga.
Ezi meko zimbini, ngokubanzi, zibonisa intsingiselo yokuphupha indlu eyakhiwayo kwaye kubalulekile ukuwuqonda lo mbuzo. Kwangelo xesha, kuyasebenza ukutolika ngokwemeko yokuqonda intsingiselo.
Ingcebiso ebaluleke kakhulu kukuzama ukukhumbula zonke iinkcukacha, kuba ukutolika kuxhomekeke kulo mbuzo. Ke ngoko, eli lixesha lokuba ufumane lonke ulwazi kwaye ulutolike ngokuchanekileyo ngangokunokwenzeka.
Iphupha lokwakha indlu yakho
Ukuphoswa kweyona mihla igqwesileyo kuqhelekile kwaye kuyinxalenye yobomi, ke eli phupha libonisa ukuba kuyakwenzeka. Kuya kufuneka uzilungiselele kwaye ulisebenzise eli thuba, kuba ukubakho kokuhlala ixesha elide, ngelishwa, kuncinci.
Inyani yokupasa ngokukhawuleza, ngamafutshane, yinto entle kwaye ibonisa ukuba kuyakufuneka ukonwabela eli nqanaba litsha. Qhubeka!. Ekupheleni kosuku, yiyo kanye le ngcinga ekhuthaza imeko kwaye iphupha libonisa ukuba ukudibana kuya kuba kunye nawe.
Iphupha lokwakha indlu encinci
Ukuphupha indlu isakhiwa kuthetha ukuba umntu okhethekileyo kwimbali yakho yangaphambili uza kubuyela ebomini bakho. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqonde ukuba kuya kusebenza ukubonisa uxolelo lwakho kwaye uxolele umntu lowo.
Kangangokuba ingabonakala intle kwaye imnandi ekuqaleni, inyani kukuba inokwenza umahluko ebomini bakho. Ngendlela efanayo, lixesha kunye nexesha lokuqalisa ukusebenzisa zonke ezi ngcebiso.
Iphupha lendlu ephakathi iyakhiwa
Usapho liziko elingcwele nayo yonke into el mundo Kuya kufuneka uyiqonde le nto, ke ukudibana nabo bonke abantu kwakhona yinto elungileyo. Le ndibano yosapho ifanelekile kwaye iya kuphinda imise unxibelelwano oluhlala luhle kubo bonke abantu.
Zama ukuwaxabisa la maxesha kunye neemvakalelo ezizisayo, kuba ubomi buzele ziimeko ezilungileyo nezingalunganga. Imfihlo kukuhluza. Kwangelo xesha, ukuba kufuneka uxolise, cela kwaye ungazibambeli kuwe ezo mvakalelo, kwaye ukuba kufuneka ucele uxolo komnye umntu, cela uxolo.
Iphupha lendlu eyakhiwayo
Inkalo yamakhondo emisebenzi iya kuphuculwa kwaye ithuba lomsebenzi, ngethamsanqa, liya kubonakala ngathi lithathiwe.
Ke ngoko, uhlala uhlala uzilungiselele kwaye utyekelo lwendalo kukonwabela eli nqanaba litsha lizayo.
Ukuphupha indlu isakhiwa ngumntu owaziwayo
Ubuhlobo bubalulekile kumava obuchwephesha kwaye kuyafuneka ukuba usebenzise ithuba lokuhlangana kwakhona okuya kubakho. Ewe, lo ngumhlobo wamandulo kwaye uya kubuyisa yonke le mvakalelo intle.
Zama ukuthetha naye ngobomi kwaye ugcine inombolo, kuba umnxeba kufuneka agcinwe. Eli ke lixesha lokwenza la maxesha ayinyani kwaye abonakale kuwo wonke umntu.
Ukuphupha indlu isakhiwa kungakhange kugqitywe
Kuzo zonke iimeko malunga nephupha lendlu eyakhiwayo, le yeyona ifuna ukuqatshelwa. Ikwamele ukuba i (an) 'ex' inokuphinda ivele kwaye yiyo kanye le nto kufuneka ukuba ube nomoya owahlukileyo.
Zama ukwenza, ngokwento exelelwa yintliziyo yakho, ngononophelo kwaye uhlala ucinga kancinci ngekamva. Ngokuqinisekileyo, ukuba ufuna ukuthetha, thetha kwaye yiyo loo nto: yonke into isonjululwe ngokulula.
Ukuphupha ukuba indlu eyakhiwayo iyawa
Ukuba, kwelinye icala, iintlanganiso zilungile kwaye zizisa iimvakalelo ezintle, akunakuthethwa okufanayo ngeli phupha. Okona kubonakaliswa kuxhaphakileyo kule meko kukudityaniswa kwimeko yotshaba olungavela kwakhona kunxibelelwano.
Esona simo sengqondo kufuneka usithathe: musa ukubaleka umyeke loo mntu athethe, emvumela ukuba azicacise. Ukuba uziva ukuba ukhuseleko lwakho lusemngciphekweni, zama ukuzikhetha uze ucele uThixo ukuba achukumise intliziyo yakho.
Ngaba intsingiselo ilungile okanye imbi?
Ukuphupha indlu isakhiwa kunentsingiselo elungileyo kwaye kuthetha iintlanganiso, kuba ubomi buxhomekeke kuyo. Zama ke ukuxolela okanye ucele uxolelo, ukuba kukho imfuneko, kuba intlanganiso elungileyo ixhomekeke kuyo.